» भानुभक्तको ठाडो आदेशमा सस्तियो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन र उडान भाडा !
भानुभक्तको ठाडो आदेशमा सस्तियो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन र उडान भाडा !
२०७८ जेष्ठ २४, सोमबार १५:२२
इन्धनको मूल्य घटेसँगै सोमबारदेखि नै लागुहुने गरी कार्गो तथा चार्टर्ड उडानको भाडादर घटाइएको छ । निगमका प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठका अनुसार वाइडबडी विमान (एयरबस ३३०) मा साबिकको मूल्यको तुलनामा १३ प्रतिशत र न्यारोबडी (एयरबस ३२०) जहाजमा १५ प्रतिशतले शुल्क घटाएको छ ।
नयाँ मूल्य अनुसार अब वाइडबडी जहाजको चार्टर्ड तथा कार्गो उडानको भाडादर प्रतिघण्टा अमेरिकी डलर १३ हजार ४६० कायम गरिएको छ । यसअघि उक्त जहाजको भाडादर १५ हजार ५२० डलर थियो । आयल निगमले वाइडबडी जहाजको भाडादरमा दुई हजार ६० डलर घटाएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालको ठाडो निर्देशनमा हवाइ इन्धन र भाडा घटेको हो । गत विहीबार हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन मन्त्री ढकालले सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए ।
मन्त्री ढकालले इन्धन तथा उड्डयन सम्बद्ध अधिकारीहरुसँग छलफल गरी समायोजनका लागि निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्री ढकालले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलसमेतको टोलीलाई भेटी हवाई इन्धनको मूल्य समायोजनका लागि निर्देशन दिए ।
मन्त्री ढकालले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, उद्योग मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल, नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेल लगायतसँग छलफल गरेर हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
नेपाल आयल निगमलाई हवाइ इन्धनमा ४० प्रतिशत नाफा थियो । जसले १५ दिनमा डेढ करोड रूपैयाँ हुने गरेको थियो ।
निगम सञ्चालक समितिले इन्धनमा १५ प्रतिशतमात्र नाफा गर्ने नीति पारित गरेको छ ।
हवाइ इन्धनको मूल्य घटाएर भाडा घटाउने वातावरण बनाउने तत्कालीन मन्त्री ढकाल मन्त्रिपरिषदबाट बिदा भइसकेका छन् ।